I-AutoSEO kunye ne-FullSEO, yeyiphi eyona Semalt SEO yeNkonzo yeyona ilungileyo?
Okwangoku, phantse wonke umntu uvile nge-SEO. Uninzi lwakho luyazi kakuhle intsingiselo yalo kwaye isebenza njani. Ngaphandle kwentloko yakho, awuyi kuba nangxaki yokuchaza indlela ekumangalisa ngayo ekuqhubeni kwetrafikhi kunye nokubekwa kwiwebhusayithi yakho. Nangona kunjalo, sinenqaku elifanelekileyo kuwe ukuba awuqhelanga ii-SEO. Nceda ucofe apha kwaye ube ufunda ngokukhawuleza kwaye unomdla malunga nokuba zithetha ntoni ii-SEO kunye nendlela abanokunceda ngayo ishishini lakho likhule.
Kodwa amaxesha amaninzi ngokukhawuleza ndiyabuza ukuba loluphi uhlobo lwe-SEO oyithandayo i-AutoSEO okanye i-FullSEO endifumana le mbonakalo. Le, umntwana, inika xa ubabuza ubalo abaluqondi. Ewe, asingobantwana, kwaye siqinisekile ukuba unamathela ngokujikelezileyo, uyakufunda okuninzi malunga ne-SEO. Ekugqibeleni, uya kuba wenze isigqibo malunga noluphi uhlobo lwe-SEO oyithandayo.
Njengoko uyazi, ii-SEO yenye yeendlela ezingabizi kakhulu zokwenza ukuba iwebhusayithi yakho yamkelwe. Kwaye kuba ijolise kakhulu, abaphulaphuli bakho banokuziva banxibelelana kwangoko xa betyelele indawo yakho.
Ke umbuzo wesigidi sedola uhlala uluphi uhlobo lwe-SEO olugcweleyo i-FullSEO okanye i-AutoSEO?
Ngaba ungathanda i-FullSEO okanye i-AutoSEO?
Uninzi lwabanini bewebhusayithi kunye nabasebenzisi be-intanethi, abanaso isikhombisi sokuba le nto ibhekisa kwintoni na. Kwaye ayisiyonto abantu abaninzi abakhathaza ukuyazi. Uninzi lwabanini bewebhusayithi bakholelwa nje kwi-SEO. Abafuni kukhathazwa zizo zonke iinkcukacha zobunzulu. Nangona kunjalo, olu lwazi luyimfuneko, ngakumbi xa abantu abafana nawe bezama ukuyiqonda.
Ukuqonda i-SEO kuyingenelo ngokumangalisayo. Ngale ndlela, uhlahlo-lwabiwo mali ngokufanelekileyo ngelixa ukwandiswa kwamathuba okuphumelela.
Ngamawakawaka esoftware ye-SEO kunye namaqonga anje ngeSemalt, umhlaba wentengiso yedijithali uye waba yimazi. Abanini bewebhusayithi ngoku babanjiwe ukuba bakhethe okanye zeziphi iinkonzo ezilungileyo kakhulu. Abaxumi be-SEO bakhukulisiwe phakathi kokuqeshisa iarhente ye-SEO okanye basebenzise isoftware ye-SEO / iqonga. Kwaye nangona besabelana ngezinto ezifanayo, zahlukile.
I-FullSEO ibandakanya umntu okanye iqela leengcali ze-SEO njengeqela lethu apha eSemalt. Ezi ngcali zijongise ingqondo kwaye zicwangcise iindlela ezahlukeneyo kwiphepha kunye neendlela ze-SEO ezingasetyenziswanga kwiwebhusayithi yakho.
Ngelixa ii-AutoSEO zibandakanya ukusetyenziswa kweqonga lesoftware ukuphumeza izicwangciso ze-SEO kwindawo. Ngelishwa, abasebenzisi abaninzi bewebhusayithi abakhululekanga kakhulu ngombono we-auto SEO.
Ukukunceda ubone ukuba yeyiphi na engcono, siya kujonga zombini ii-SEO kwaye sivavanye izibonelelo zabo kunye nexabiso labo.
I-FullSEO isabandakanya zonke iinkonzo kunye nezibonelelo zokusebenzisa i-SEO. Ufumana ukuvelisa i-organic traffic kwaye ubukele iwebhusayithi yakho ibekwa ngokwendalo. Ngaphandle kwamathandabuzo yile nto ifunwa ngumnini webhu. Kodwa inokwenzeka njani loo nto? Abanini bewebhusayithi abaninzi bayakujongela phantsi ukubaluleka kwe-SEO. Abaninzi bacinga ukuba nje emva kokufaka amagama amabini aphambili, iwebhusayithi yabo iba yi-SEO. Kodwa akunjalo. Kungenxa yesi sizathu. Abasebenzisi abaninzi be-intanethi bayithandabuza indlela elungileyo ye-SEO epheleleyo.
Ukushiya i-FullSEO yakho kwiingcali zeSemalt kunokuba sesinye sezona zigqibo zihle uya kuzenza kwiwebhusayithi yakho. Njengeengcali, sichitha ubomi bethu sisenza oku. Sikwaze sikwenze oko kulala kwethu, ngoko akukho mntu ungcono ekusebenziseni i-FullSEOs yakho. Kwaye sikunika ixesha elingakumbi lokuphuhlisa ezo zimvo zimangalisayo. I-FullSEOs iyadinisa kwaye ichitha ixesha, kodwa awuzukukhathazeka malunga noko. Yicinge ngokwahlulahlula umsebenzi. Akukho nkampani, ishishini okanye umntu othile sisiqithi. Ngokudlulisela imisebenzi enjalo kwiqela lethu le-SEO, uzinika ixesha elaneleyo. Ixesha onokuthi uchithe ngalo uphumle kwaye ukhule kunokubandezeleka ngokulala. Kwaye uqaphele ilahleko ukuba emva kwayo yonke imigudu yakho ungakholiseki sisiphumo seFSESEO yakho.
Nangona kunjalo, nantsi ezinye izibonelelo eziphambili zokusebenzisa i-FullSEO njengazo zombini iphepha kunye ne-SEO kwiphepha lakho lewebhusayithi.
Inzuzo yokusebenzisa i-FullSEO
Unokulawula ngokupheleleyo kwisicwangciso sakho se-SEO. Nge-FullSEO, chaza ukuba iya phi. Ungadlulisela izimvo zakho, iikhonsepthi kunye nobuntu kwiwebhusayithi yakho ngelixa usebenzisa i-SEO yakho. Isicwangciso sakho sesakho ngokupheleleyo, okuthetha ukuba sahlukile.
Unokuqinisekisa ukuba umsebenzi we-SEO wenziwe ngokwesicwangciso. Ukujonga isicwangciso sakho ukufumana itanki asiyondlela imnandi yokuqalisa iwebhusayithi. Nge-FullSEO, uza kujonga indawo yakho kunye neempazamo ezichanekileyo ekuphunyezweni kwesicwangciso sakho se-SEO. Ngale ndlela, awonwabanga kwaphela sisiphumo.
Ngee-FullSEOs, uyakwazi ukuphucula iphepha lakho elingelolakho. Ukuba nekhasi elingelolakho kubalulekile ekuqinisekiseni ukugcwala kwabantu kwindawo yakho. Amaphepha angaphandle iwebhusayithi yakho ngaphandle kwewebhusayithi yakho. Xa ubhala iposti yondwendwe kwenye ibhlog okanye ushiye uluvo, olo luthathwa njengonyuselo lwephepha. Ii-FUllSEOs, ziyakuvumela ukuba ubambe ngesandla izikhonkco ozisebenzisayo kwezi zingasemva. Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu kubasebenzisi be-intanethi ukunxibelelana nezimvo zakho kunye newebhusayithi yakho. Ngezimvo ezichaza i-skincare, i-FullSEO yenza kube lula kuwe ukuba ubeke izikhonkwane kwi-webhusayithi yakho uthetha nge-skincare. Ngale ndlela, uguqula abafundi ukuba babeke izimvo zabo babe zizithuthi kunye nokuba ngabathengi.
Unokukhetha apho indawo yakho idityaniswe khona. I-FullSEO ikuvumela ukuba ukhethe umgangatho wokudibanisa iisayithi kunye nomgangatho womxholo ojikeleze i-backlinks yakho. Ngale ndlela, ulawula ukuba ngubani obona into kwaye abonise indawo yakho ngeyona ndlela intle.
Akukho nto igqibeleleyo, kwaye kukho iindlela ezithile ezisezantsi zokusebenzisa i-FullSEO
Ukuchitha ixesha: I-FullSEOs ifuna ixesha elininzi kunye nomzamo kubabhali bayo. Ngokukodwa xa yenziwe ngumntu onamava enkundleni. Ukuqesha iinkonzo zearhente ye-SEO kunokuba yindlela elungileyo yokuphepha oku.
Ifuna iqela elizinikeleyo: uya kudinga iqela elizinikeleyo kakhulu ukuba ukhuphe i-FullSEO emangalisayo.
Kwiiwebhusayithi ezinkulu, ukuqaliswa kwe-FullSEO kungathatha ixesha elide.
Inkulungwane yama-21 iza nenkqubela-phambili emininzi kubugcisa. Imizamo yabantu incitshiswe kakhulu ngokuphuculwa kokuphuma kunye nayo yonke into ebulela kubuchwepheshe. Kwaye ngokuqinisekileyo, abantu abaqaqambileyo abanceda ukuyila.
I-AutoSEO yenye into yobomi bethu apho itekhnoloji ibonelele ngoncedo olukhulu. I-SEO ezenzekelayo kukusetyenziswa kwesoftware ezenzekelayo okanye engeyo-automated ye-SEO kunye neqonga lokuphumeza ubuchule be-SEO. Itekhnoloji le ilungiselele umda wemizamo yabantu.
Nazi ezinye izibonelelo ze-AutoSEO
Ixabiso eliphantsi kune-FullSEO. Ixabiso eliphantsi kakhulu kune-FullSEO. Ngenxa yokuba kufuneka umgudu omncinci okanye awukho umntu, akukho qela le-SEO. Oku kunciphisa iindleko zesondlo ezenza ukuba abavelisi beenkonzo ze-AutoSEO banciphise iindleko zabo.
Isebenza ngokulula imisebenzi exineneyo: ngaphandle kokukhathala, ukufumana ubunzima bokusebenza kwengqondo okanye ukudinwa, oomatshini banokugcina isantya sokusebenza esisebenza ngokukhawuleza kunye nangokungaguquki. Oku kwenza kube lula ukuphatha imisebenzi enjengophicotho, ukujonga amakhonkco aphukileyo, ingxinano yamagama aphambili, iithegi kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo kwiiwebhusayithi nokuba zingakanani.
Kulula ukufumana ulwazi oluchanekileyo noluthe kratya kwimigangatho yamagama akho aphambili.
Le teknoloji ikunika amandla okuhlalutya ukhuphiswano lwakho lwasemva, ubuyama bamagama aphambili, iithegi kunye nenye idatha eluncedo. Emva koko unokuxhaphaza olu lwazi, uqonde iimfihlo zabo kunye nokuphucula indawo yakho.
I-AutoSEO ikuvumela ukuba ucwangcise imisebenzi ye-SEO elonga ixesha kakhulu.
Akukho sidingo sokuqesha iqela elikhulu le-SEO. Itekhnoloji inokwenza isoftware yenze umsebenzi wabantu abalishumi, kwaye oku kugcina iindleko kumthengi nomthengisi. Ngokuphelisa isidingo sokuqesha iqela elikhulu, iinkampani ezincinci kunye nokuqalisa zime ithuba elingcono lokusinda kwimarike enzima.
Ukukhutshwa komntu kuhlala kusafuneka. Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba abantu basaphathe ezona zinto zintle kwaye zibalulekile. Nokuba ubuchwephesha bobuchwephesha buthini, kusekho ithuba lokungasebenzi kakuhle.
Xa ingasetyenziswanga kakuhle, isoftware ye-SEO yenza i-backlinks embi. Oku ke kunokufumana isohlwayo kwiwebhusayithi yakho.
Uninzi lwesoftware ye-SEO igxile kubungakanani bamagama aphambili e-SEO, ii-backlinks njl njl.. Ayiqwalaseli kangako ingqalelo. Oku kunokuba yingxaki ekuhambeni kwexesha.
Unxibelelwano oluninzi olwenziwe kunye nesoftware ye-SEO okanye amaqonga akunakukwenza ukuvelisa izithuthi kwindawo yakho.
Ufanele usebenzise yiphi?
Ngokubonelela ngeenkonzo zombini, uSemalt ukukunika amathuba amahle okukhetha eyona ndlela ifanelekileyo. Umntu ngamnye kunye newebhusayithi ikhethekile, kwaye ufanele unyango olulodwa. Nokuba yeyiphi inketho oziva ukuba ilungile, sazise, kwaye siya kuzisa eyona ndawo intsha ye-SEO owakha wayibona. Ngeqela lethu elimangalisayo kunye neearhente zethu zokukhathalela abathengi abahlala bekho, unokubuza nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwaye ikuphumelele. Siziva sinentembelo ngakumbi kukwazi ukuba ngoku ukuqonda ukuba i-FullSEO kunye ne-AutoSEO kuthetha ntoni. Ngolu lwazi, ngoku unokukhetha phakathi kweSemalt FullSEO kunye neenkonzo ze-AutoSEO ngalo lonke ulwazi oludingayo lokuqinisekisa ukuba ukhetha inkonzo efanelekileyo kakhulu ye-SEO kwiwebhusayithi yakho kunye neshishini. Ngoku unokukhetha nayiphi na indlela ocinga ukuba yeyona ilungileyo.